XOG CUSUB: Maxaa laga helay Guriga Ninkii dadka ku laayey Mareykanka? (Wax badan ka Ogow) – Shacabka News
XOG CUSUB: Maxaa laga helay Guriga Ninkii dadka ku laayey Mareykanka? (Wax badan ka Ogow)
Kadib weerarka ayaa waxaa isoo taraya xogaha ku saabsan ninka dilkan geystay oo ah nin caddaan ah oo lagu magacaabo Stephen Paddock, oo 64 jir ahaa. Paddock waxaa la sheegay in uu ahaa nin ladan oo xisaabiye hore ahaa, islamarkaasna haystay shatiga duuliyenimada, iyo shatiga ugaarsiga, mana lahayn wax diiwaan hore oo dambi ah.
Balse qof mar daris la ahaan jirey ayaa sheegay in uu qof qamaarka aad u ciyaara, islamarkaasna dhaqamadiisa ahaayeen kuwa aad loola yaabo. Mid ka mid ah saraakiisha booliiska Las Vegas ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ay jiraan sababo loo rumeysan karo in Paddock uu ahaa qof xagga maskaxda isaga buuqsanaa.
Paddock ayaa rasaas oodda kaga qaaday dad badan oo ka qeybgalayay bandhig faneed habeenkii axadda, isaga oo dadka kasoo toogtay qol uu ka deganaa Hotel Mandalay Bay, wuxuuna halkaas ku diley 59 qof, 515 kalana waa uu ku dhaawacay ka hor inta uusan qoriga isaga isku dhufan.
Marilou Danley ayay booliiska sheegeen in ay ka shaki baxeen
Paddock ayaa dacwad ku furay hoteelka Cosmopolitan ee Lasvegas 2012-kii kadib markii uu ku kufay wax meel la dhigay, balse dacwadaas ayaa lala laabtay 2014-kii
Author Cabdirahman AhmedPosted on 03/10/2017 03/10/2017 Categories WARARKA CALAMKA, WARARKA MAANTA
Previous Previous post: Axmed Madoobe oo si dah dag ah ugu Yeeray Xubnaha Aqalka Sare uga jira Mamulka Jubbaland..
Next Next post: Maamulka Somaliland oo si yaab leh uga Hadlay Saldhiga Turkigu ka Furanayo Magaalada Muqdisho.( AKHRISO)..